मध्य भोटेकोशी जलविद्युतको आइपीओमा २८१ जनाले दिए ७० हजार २६० कित्ताका लागि आवेदन, कहिलेसम्म भर्न पाईन्छ ? – Artha Sarokar :: Nepal's No.1 Economic News portal.
मध्य भोटेकोशी जलविद्युतको आइपीओमा २८१ जनाले दिए ७० हजार २६० कित्ताका लागि आवेदन, कहिलेसम्म भर्न पाईन्छ ?
काठमाडौं । मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनीको आइपीओमा मंगलबारसम्म २८१ जनाले ७० हजार २६० कित्ताका लागि आवेदन दिएका छन् । बिक्री प्रबन्धक ग्लोेबल आइएमई क्यापिटलले मंगलबार साँझ सम्ममा २८१ जनाले ७० हजार २६० कित्ताका लागि ७० लाख २६ हजार रुपैयाँ बराबरको आवेदन दिएका हुन् ।
यस कम्पनी मंगलबारबाट सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका आयोजना प्रभावितका लागि कुल ६० लाख कित्ता आइपीओ बिक्रीमा ल्याएको थियो । जसमा ३०% ले हुने १८ लाख कित्ता सेयर भोटेकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर १ र ५ (साविकको लिस्ती र मार्मिंग गाविस) र बाह्रबिसे नगरपालिका वडा नम्बर ५, ६, ७ र ८ (साविकको गाती, घुम्पांग र मानेश्वरा गाविस) का स्थानीयलाई छुट्याईएको छ ।
यस्तै ७०% ले हुन आउने ४२ लाख कित्ता सेयर सन्धुपाल्चोक जिल्लाका अन्य क्षेत्रका स्थानीयवासीको लागि छुट्याइएको छ । लगानीकर्ताले यसमा साउन १७ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । उक्त समयमा माग अनुसार आवेदन नपरेमा भने साउन ३२ गतेसम्म खुला रहनेछ भने स्थानीयले न्यूनतम ५० कित्तादेखि अधिकतम ४०० कित्तासम्मको लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।
यसमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा ३६ वटा र काठमाडौं जिल्लामा ७ वटा संकलन केन्द्रबाट दरखास्त फारम भर्न र रकम बुझाउन सकिनेछ । साथै, आस्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पनि सेयर भर्न सकिन्छ ।